Alahady 10 Martsa 2019. – FJKM
Alahady 10 Martsa 2019.
1 Mpanjaka 10.14-29
éAry Solomona mpanjaka dia nanakarena sady hendry noho ny mpanjaka rehetra ambonin’ny tany » (and23)
1-Ny harena nitobaka . Tsy hita intsony ny volamena , volafotsy , hazo sarobidy , ny ivoara…Tsarovy kosa fa ho antsika ny tsodrano hoe: » Fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin’ny voninahitra ao amin’i Kristy Jesoa » (Fil 4.19).
2-Ny zava-kanto , fatratra! Ilay fiakarana ho eo amin’ny seza fiandrianana voaravaka lohan-diona dia tsy jisy toa aza (and 19-20). Toy izany koa ireo fanaka samihafa . Izao kosa no hafatra ho antsika : »na inona na inona marina , na inona na inona manan-kaja, na inona na inona mahitsy , na inona na inona madio , na inona na inona maha-te ho tia , na inona na inona tsara laza , raha misy hatsaram-panahy ary raha misy dera dia hevero izany (Fil 4.8).
3-Ny fitaovam-piadiana betsaka : Ampinga volamena efa ho 500 sy kalesy 1400 samy hary fomba no nananany. Fa isika kosa hafarana hoe: « Tafio avokoa ny fiadian’ Andriamanitra , mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly » (Efes 6.11) . Fa mihoatra noho ireo , vakio ny and 24.